Jot Script, pensilihazo teboka tsara ho an'ny iPad | Vaovao IPhone
Jot Script, pensilihazo teboka tsara ho an'ny iPad Evernote sy Adonit, Mpanamboatra kojakoja iPad, dia namorona fiaraha-miombon'antoka, amin'ny teny espaniola ny UTE (fivondronan'ny orinasa vonjimaika) hamoronana penina Bluetooth vaovao antsoina hoe Jot Script Evernote Stylus. Miaraka amin'ny fanondroana 1,9mm fotsiny dia io no tena marina vita. Ireo maodely efa misy eny an-tsena dia matetika manana savaivony 6 mm, noho izany dia tsy misy ilana azy ny manandrana mandray naoty ary avy eo mahatakatra izay tiana soratana.
Ny penitra nomerika Adonit dia mampiasa ny teknolojia vaovao novolavolain'i Penultimate, fitambaran'ny haingam-pandeha haingam-pandeha, Bluetooth, ary rafitra fifandraisana Adonit miaraka amin'ireo rindranasa mifanaraka amin'ity fitaovana ity.
Ny Jot Script Evernote Edition dia noforonina mba ho lasa fitaovana fanoratana tianao indrindra. Miaraka amin'ny famaranana metaly matevina, ambonimbony, tendrony tsara sy maivana beIreo dia toetra mampiavaka ny Adonit tamin'ny zavatra vokariny rehetra.
Ny pensilihazo noforonin'i Adonit io no fitaovana tsara indrindra handraisana naoty. Izy ireo dia niara-niasa tamin'i Penultimate ho fampifangaroana tanteraka amin'ny fampiharana fanoratana. Ny sendika dia namela azy ireo hisaintsaina hatrany am-boalohany ny fomba penina tsara indrindra hanoratany amin'ny efijery nomerika. Manomboka izao dia horaisina an-tanana indray ny naoty.
Miasa ilay fitaovana bateria karazana AAA iray ary mifandray amin'ny alàlan'ny Bluetooth 4.0 mankany iPad sy iPhones, ka ny fitaovana mitondra an'io haitao io ihany no afaka mampiasa azy (iPad 3 mandroso, iPad Mini ary avy amin'ny iPhone 5). Ny penina dia mampiasa ny iray amin'ireo zava-baovao an'ny Penultimate izay rehefa mahatsikaritra fa manakaiky ny penina dia mihalehibe ny faritra an-tsoratra mba hahitana sary tsara kokoa. Mihetsika koa ny "taratasy" rehefa manoratra.
Raha liana amin'ny Jot Script ianao dia azonao atao ny mametraka ny famandrihanao amin'ny alàlan'ny Evernote na Adonit ary amin'ny alalàn'ny $ 74,99 eo anelanelan'ny efatra sy enina herinandro dia afaka mankafy an'ity fitaovana vaovao ity ianao.
Fanazavana fanampiny - Famerenana ny Wacom Intuos Creative Stylus penina nomerika ho an'ny iPad
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Jot Script, pensilihazo teboka tsara ho an'ny iPad
zavatra tsy fahita raha misy! aza maika satria mbola tsy mahatsapa ny tsindry ianao, izay no tena mahaliana ny mpanao sariitatra.
Emulator GBA iray hafa tonga ao amin'ny App Store miafina ao anaty fampiharana iray